That's so good, right?: A Woody Surprise
ဒီနေ့ဟာ အတော်လှပသော နေ့လေးတစ်နေ့လို့ပြောရပါမယ်။ ကျေးငှက်လေးတွေကလည်း ကျည်ကျည်ကျာကျာမြည်ကြွေးလို့။ နေမင်းကြီးကလည်း လိမ္မော်၊ အနီ နှင့် အ၀ါရောင်သစ်ရွက်တွေကိုအလင်းတန်းတွေဖြတ်သန်းလို့လှပနေတာများ ပြောမပြတတ်အောင် ပါပဲ။ ကျွန်တော့် ချစ်ချစ် အပြုံးချိုချိုနဲ့ကောင်ကလေးကတော့ မောဟိုက်မှုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့နေ လေရဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့အားသန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အားလပ်ချိန်အတော်များများ မှာ စိမ်းစိုသော သစ်တောအုပ်ရယ်၊ စပါးပင်တွေ ကောက်ပင်တွေယိမ်းနွဲ့နေတတ်တဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေနဲ့အတူ အေးမြတဲ့ရေတွေစီးဆင်း နေတတ်တဲ့စမ်းချောင်းတွေ အနီးအနားသွားကာ အေးအေးလူလူအနားယူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဆူညံရှုပ်ထွေးလှသော မြို့တော်ကြီး နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကို ထွက်ပြေးရင်းပေါ့လေ။ ကျွန်တော်က ဂေဟဗေဒ (ecology) ဘာသာရပ်ကို အထူးပြုယူပြီးကျောင်းတက်နေသလို တစ်ဖက်ကလည်း သစ်တောများပြန်လည်စိမ်းလန်းစိုပြေဖို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဌာနတစ်ခုမှာ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇီဝဗေဒ ပညာရှင်တစ်ယောက် ကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါသေးတယ် ကျွန်တော် တကယ်ချစ်တဲ့သစ်တောအုပ်တွေထဲမှာလေ။ ကျွန်တော့်ချစ်ချစ်ကလေး ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့အချိန်အတော်များများကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကွန်ပျူတာတစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်နေခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမော်နီတာတစ်ခုရဲ့ရှေ့ဝယ် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ရူးရူးမူးမူးမဟုတ်ပေမဲ့ သူဇွဲခတ်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံကြ ချစ်ခင်မိကြတာကတော့ ကျောင်းမှာဖြစ် ပြီးတော့ သူ့အလုပ် အကိုင်သဘာဝကြောင့်လည်း ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်ရခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါတယ်။ သူဟာတကယ့်ကို ရည်မွန်ချိုသာသော ချစ်စဖွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် နည်းနည်းလေးတော့ မေ့လျော့တတ်တယ် ဆိုရမလားဘဲ။ လတ်တလောအဖြစ်အပျက်ကိုပြောရရင် အရင်အပတ်က ကျွန်တော့်မွေးနေ့ဆိုတာကို ဒီနေ့မတိုင်ခင်ထိ မေ့နေခဲ့တယ်။ ဒါလေးကြောင့် လည်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ နေရောင်ဖြာပြီးနွေးနေတဲ့ ဒီနေ့မှာ စိမ်းလန်းတဲ့သစ်တောအုပ်ထဲကိုရောက်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့် မွေးနေ့အတွက် အထူးတလည် မလုပ်ပေးခဲ့မိခြင်းအပေါ် ပြေရာပြေကြောင်းဖြစ်စေဖို့ သူ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုပေးအပ်ခြင်းပေါ့နော်။
ကျွန်တော်သဘောကျတတ်တဲ့ သွားတတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းလေးတွေက အကွေ့အကောက်မညီတဲ့ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေလိုပါပဲ ဟိုရောက်ဒီရောက် တဖြောင့်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သနားစရာ ကျွန်တော့်ချစ်ချစ်လေးကတော့ ကလေးဆန်တယ်ပြောရမလား ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ် ပြီးရင် ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်လျှောက်လာမယ် အဆုံးသတ်ကဒါဆိုတာ မှန်းလို့ရနေတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ ခါတိုင်းနဲ့မတူ စမ်းချောင်းတွေဘက် အဆုံးမသတ်ဘဲ ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားတွေရှိတဲ့ တောင်ကုန်းမြင့်တစ်ခုမှာ လမ်းဆုံးပါတယ်။ ပြေပြစ်သော မြေလမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်သွားပြီးနောက် ကျောက်သားတွေနဲ့အစပျိုးကာ ကျောက်ဆိုင်အပြည့် တောင်ကုန်းမြင့်မြင့်ကနေ တကယ့်ကို ကျယ်ပြောလှတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးရယ် ခပ်ဝေးဝေးရှုမျှော်ခင်းတွေရယ် အမှန်အကန်ကြည့်မောမဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့တာ။ ဟိုရှုခင်းလေးမျှော်လိုက် သစ်ပင်လေးတွေငေးလိုက် ပန်းလေးတွေမွှေးလိုက်လုပ်ရင်း သွား လိုက်တာ ဘိုဘို ချော်ကျမလိုဖြစ်မှ သူ့ကိုလှည့်ကြည့်မိပါတယ်။
“အာ….ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဟဲ အိုကေ” ကျွန်တော် အမြန်နောက်လှည့်ပြီးပြေးသွားမလိုလုပ်လိုက်တော့ သူကရယ်ကျဲကျဲနဲ့ ကိုယ်ဟန်ထိန်း ရင်း အဆင်ပြေကြောင်းပြောပါတယ်။ သူသည်လည်း ဟိုသည်ကြည့်ရင်း လာလိုက်တာ စီးထားတဲ့ဖိနပ်ကြောင့်ကော ကျောက်စရစ်များ ကြောင့် ချော်ကျမလိုဖြစ်ပြီး သစ်ပင်များကိုဆွဲကိုင်ကာ ကိုယ်ဟန်ထိန်းနိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ “ခဏနားကြပြီး တစ်ခုခုသောက်ကြ မလား?” ကျွန်တော်သူ့ကို စကားစလိုက်တော့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကာ ချွေးစက်လေးတွေခိုသီနေတဲ့ သူ့အညိုရောင် ဆံနွယ်တွေကို သပ်တင်ရင်း သစ်မြစ်ဆုံတစ်ခုမှာထိုင်ချလိုက်ကာ ကျောပိုးအိတ်ထဲက ဖျော်ရည်ဘူးကိုထုတ်သောက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ထို့အတူ ရေသန့်ဘူးသေးလေးကိုထုတ်သောက်လိုက်ရင်း သူ့နောက်ပါးနားမှာ ထိုင်နားလိုက်ရဲ့။
“နေသာရဲ့လား အိုကေလား ချစ်လေး”
“အင်း….ဒီလို လမ်းလျှောက်အားကစားမျိုးနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မဟုတ်တော့ နည်းနည်းမောတယ် ဘေဘီ”
“သိတယ်….ချစ်လေး ဆက်မသွားချင်တော့ဘူးဆို နောက်လှည့်ပြန်ကြမယ်လေ” မြင့်မားသော ဘ၀တောင်တန်းတစ်ခုပေါ်ကို အတူတကွ တက်ရောက်လိုခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လှည့်ချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းပြချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ရင်း နှစ်ဦးသားအတူတကွ လှမ်းတဲ့ ပထမဆုံးခရီးကို ဦးမကျိုးချင်တာတော့အမှန်ပါ။ မကြာခဏ ဒီလို အေးဆေးသက်သာအနားယူခဲ့ကြပေမယ့် ဒီခရီးစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်ဦးဆောင်ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ အထူးသီးသန့်လေးဖြစ်ပါတယ်။ “အို…မဟုတ်ရပါဘူး။ ဘေဘီပြောတော့ ရောက်ကာနီးပြီဆို။ အဲ့နေရာကိုဘေဘီအရမ်းသွားချင်နေ တာ ကိုသိတယ်။ လာသွားစို့” သူပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထရပ်လိုက်ကာ အထုပ်အချို့ကိုလွယ်ရင်း တောင်တက်လမ်းဆီကိုလျှောက်ပါရော။ သူ့ကိုယ်ဟန်ပုံပန်းက ကျစ်လစ်သန်မာသော ကြွက်သားပိုင်ရှင်မျိုးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့လိုပဲပရိုဂရမ်မာအများစုဟာ ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့်ကိုယ် ဟန်တွေပိုင်ဆိုင်ကြတာများပေမယ့် သူကတော့ အဲ့လိုမဟုတ် အရပ်အမြင့် ၅ပေ၁၀လက်မနဲ့အညီ ရေကူးသမားကိုယ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ဗိုက်သားမှာ six packs တွေမရှိပေမယ့် အဆီပိုလုံးဝမရှိသော ကျွန်တော့်အကြိုက်ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်ပါလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခမျာ တောင်တက် သမားတွေလို သက်လုံမကောင်းတာလား အကြမ်းမခံတာလားမသိ သူ့နောက်ဖျားက လိုက်ပါလာသော ကျွန်တော့်မှာ ခပ်ပြေပြေတက် သွားသော တောင်တက်လမ်းတလျောက် ကျောပြင်ကိုတွန်းတွန်းပြီး သွားစေကာ နောက်တစ်ခါဘေးကိုလျောမကျစေရေးကြိုးစားရပါ တယ်။
သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်က သစ်ခွပန်းတွေကို လှမ်းအငေးမှာ သူကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်သွားပါပြီ။ သစ်ပင်ခပ်ကြီးကြီးရဲ့ ပင်စည်ကို လက်ထောက် လိုက်ကာ သူ အသက်ကိုမျှင်းရှူနေလေရဲ့။ ကျွန်တော်က မောတော့မောပေမဲ့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ အမောပြေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူလွယ်ထားတဲ့ အိတ်ကိုလှမ်းချွတ်ယူလိုက်ပြီး ခါတိုင်းကျွန်တော်လာရင် ပစ္စည်းတွေဖွက်ထားနေကြ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ ခြုံနဲ့ကွယ်နေသော သစ်ကိုင်းမှာ ချိတ်လိုက်ဖွက်လိုက်ပါတယ်။ အာ….သစ်ပင်နောက်ဘက်ကိုဝင်လိုက်တော့ အမှိုက်တွေမရှိရှင်းနေတာ ကြောင့် ကျွန်တော် အံ့အားသင့်မိရပါရဲ့။ ဒီလူသွားလမ်းကြောင်းလေးအတိုင်း လူသွားလူလာမများလှဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ် လေ။ အခု ကျွန်တော် ဖွက်ထားခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအချို့ကနေရာရွေ့နေသလို ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါသုံးတတ်တဲ့ လက်ဆွဲခြင်း တစ်ခြင်းကို သစ်ကိုင်း တစ်ကိုင်းမှာ ကြိုးနဲ့အသေအချာချည်နှောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ စက္ကူအညိုတွေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုပ်ပိုး ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုခု ဟာ ခြင်းထဲမှာအကျအနရှိနေလေရဲ့။ ဘယ်သူတွေကဘာအတွက်လုပ်ထားမှန်းမသိပေမဲ့ သူတို့တွေ အလွန်တရာပျော်ရွှင်သွားစေမယ့် surprise တစ်ခုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော် အဲ့ဒီခြင်းကိုကြည့်ပြီး နောက်ပြန်အဆုတ် ခဲလုံးတစ်လုံးကိုနင်းမိပြီးဟန်ချက်ပျက်မလိုအလုပ်မှာ သန်မာသောလက်နှစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို နောက်ဖက်ကနေရစ်သိုင်းထွေးဖက်ခြင်းခံလိုက်ရရာ သန်မာတောင့်တင်းသော ချစ်ရသောသူရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကိုရောက် ရှိသွားရပါတယ်။ “HAPPY BIRTHDAY ဘေဘီ” အရိပ်အမြွက်တောင်မပြခဲ့ဘဲ ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ခါ ဆုမွန်ချွေတယ်လေ။ ကျွန်တော့် အသဲနှလုံးတွေ အရည်ပျော်သွားခဲ့ရပါပြီ။ ‘ဘေဘီ့ကိုကြည့်ရတာ ချစ်လုပ်ဆောင်ချက်က အောင်မြင်သွားပုံရတယ် ဟုတ်လား’ ကျွန်တော့်ဖာသာ ကျွန်တော်ပြုံးမိရကာ စကားခွန်းတုန့်မဆိုငြိမ်နေစဉ်မှာပဲ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ရှပ်အကျ င်္ီအောက်ကို လက်လျှို ၀င်ရောက်လာပြီးနောက် ရင်အုပ်အစုံရယ် ဗိုက်သားပြင်အနှံ့ရယ် ခပ်ရွရွလေးပွတ်သပ်ပါတယ်။
“Gym ကစားနေကျ အားကစားသမား အတော်များများက ဒီလိုတောင်တက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ဖို့ကတော့ အေးဆေး… အသင့် ဆိုတာ သိဘူးလား ဘေဘီ? ကို့ gym ဆရာက တာတိုအပြေးချန်ပီယံဗျ…ကိုတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာအမြဲ”
မထူ့တထူ သူ့နှုတ်ခမ်းများဟာ ကျွန်တော့် လည်တိုင်တွေကို ရွရွလေးပွတ်သပ်လာသလို ကျွန်တော့်နားရွက်နားကိုလည်း စကားတိုးတိုး ကပ်ပြောသလိုမျိုး ကလိတယ်။ နောက်ပြီး တပြိုင်တည်းလိုလို ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ကိုအသာပွတ်သပ်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုတွေ့ရှိ သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ လက်ညှိုးလက်မနှစ်ခုသုံးကာ အသာပွတ်သပ်ပါရော။
‘အခု ကို ဘေဘီနဲ့အတူ ဘယ်နေရာသွားသွား ဘယ်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကိုတက်တက် လိုက်နိုင်နေပြီဗျ။ ဒီမနက်စောစော ဘေဘီ အလုပ်မှာရှိနေတုန်း အပြေးလေးလာပြီ ခြင်းကိုချိတ်ထားခဲ့တာလေ”
ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်ခံစားလာရပြီး ချစ်သူလေးလုပ်ဆောင်ပေးမှုအတွက် အရမ်းကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
“လေသံနားထောင်ရတာ အခုလေးတင်ပဲလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းနော် ဟွန်း”
“ဒါကိုရဖို့ကြိုးစားထားရတာ နှစ်လလောက်ကြာတယ်ဗျ….ဘေဘီရဲ့ တကယ့်မွေးနေ့ မရောက်ခင်အချိန်လောက်က ဒီနေရာကို ကိုတို့ ရောက်သင့်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဘေဘီ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်က မနေ့ကထိမရသေးတာလေ”
“လက်ဆောင်!!!” ကျွန်တော် ရှေ့ကိုတိုးကာ စက္ကူအညိုရောင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ဟာကိုလှမ်းယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သန်မာတဲ့လက်မောင်းတွေက သူနဲ့မကွားသွားစေဖို့ ဖက်တွယ်ထားပါတယ်။ “အို…အခုမယူသေးနဲ့ဦးလေကွာ….အလျင်မလိုပါနဲ့” သူ ကျွန်တော့် လည်တိုင်နဲ့နားရွက် တွေကို အနမ်းချွေတယ်။ အဲ့လိုအနမ်းပေးတာ ကျွန်တော့်ကိုမရိုးမရွ အရူးအမူးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်ဗျ။ “ကိုတို့ အခုလုပ်နေဆဲ လေ့ကျင့်ခန်းလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်”
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့စွမ်းအင်အပေါ် အခုအံ့အားသင့်ရပါပြီ။ ခပ်မတ်မတ် တောင်ကြောအတိုင်း မနားဘဲတောက်လျှောက်တက်လာခဲ့တာပါ။ အခုသူက ကျွန်တော့်ကို နှစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာကို ခေါ်သွားချင်နေပြန်တယ်။ ကျွန်တော် သက်ပြင်းလေးအသာချ….ပြုံးလည်းပြုံးမိရ ကာ သူ့လက်အစုံမှာ လွင့်မျောလိုက်ပါရဲ့။ သူက ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်သားတွေကို ပွတ်သပ်နေရာမှ ရှပ်အကျ င်္ီကိုမချွတ်စေပါ တယ်။ သူ့နှာခေါင်းဝကထွက်နေသော လေပူနွေးနွေးလေးရယ် သူ့နှုတ်ခမ်းသားနုနုလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်လည်တိုင်၊နားရွက်တွေကို ပွတ်တိုက်တာလေးတွေရယ်ကို ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထနေဆဲမှာ ချွေးစေးများဖြင့်ရွှဲစပြုနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရှပ်အကျ င်္ီကို ခေါင်းကနေဆွဲချွတ် ကာ သစ်ပင်မှာချိတ်ထားသော ဆွဲခြင်းထောင်းမှာ သူချိတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေကိုပွတ်သပ်နေ ရင်းမှ ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းကိုဖြုတ်တယ်ပြီးတော့ ကြယ်သီးတွေကိုဖယ်တယ်…နောက် ဇစ်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်လေ။ အဲဒါပြီးတော့ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ထိုင်ချလိုက်တဲ့ရွေ့လျားမှုကို ခံစားသိရှိလိုက်သလို ဘောင်းဘီကော အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါ တောင်တက်စီးဖိနပ်ရှိတဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ထိ သူဆွဲချလိုက်တယ်။ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံအနှံ့ပွတ်သပ်သလို ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်း တင်ပါး တစ်ဝိုက်ကို အနမ်းတွေဝေသလို လျာဖျားလေးနဲ့တင်အကွဲကြောင်းထဲ လျက်ပါလေရဲ့။ ကျွန်တော်သိတယ် ချွေးစို့စပြုနေပြီဆိုတာကို။ ဒါပေမဲ့ ခါးအစုံကိုလက်နဲ့တင်းတင်းကိုင်ပြီး တင်ပါးတွေကိုနမ်းနေတာ အကွဲကြောင်းတလျောက်လျာနဲ့ကလိနေတာတွေကို တားမြစ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မရပါဘူး။
ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကိုရှေ့ကိုကိုင်းပြီး ကုန်းလိုက်ဖို့သူ့လက်နဲ့အနေအထားပြင်တော့ ကျွန်တော်လည်း သစ်ပင်ပင်စည်ကိုလက်နဲ့ထိန်း ကိုင်လိုက်ကာ ခရေ၀ကိုသူရှာတွေ့အောင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ငြင်းဆန်မှုတွေမလုပ်နိုင်ဘဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ညည်းညူတာနဲ့ မိန့်မူးသာ ယာသံလေးတွေကို သူ့အနမ်း သူ့အလျက်အပြုအတိုင်း အသံပြုနိုင်ပါရဲ့။ လျှာအဖျားကိုမာအောင်တောင့်ပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲတိုးဝင် ကလိချိန်မှာတော့ သူ့လျှာခပ်မာမာလေးတစ်ခုလုံး တိုးဝင်သွားအောင် နောက်ပြန်ဖိသွင်းတာကို မရည်ရွယ်ဘဲလုပ်မိပါတယ်။ အာ…. သူ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်ကစားနေသေးတာပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းမာသထက် မာလာတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူအားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကစားသလို ကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုလည်း သူ အားရပါးရလျှာနဲ့ကလိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲ ရာနှုန်းပြည့်မိုးမျှော်ချိန်မှာတော့ ခရေ၀ကိုကလိနေတာကိုရပ်ကာ သူရှိရာဘက်ကိုမျက်နှာမူစေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ဘိုဘို့ကိုတွေ့ဆုံချိန်မှာ သူ လူပျိုစစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ porn star တစ်ယောက်ရဲ့ deep throat လုပ်နိုင်စွမ်းမျိုးရှိလာသလို ကျွမ်းကျင်မှုကလည်း တကယ်အလန်းစားပေါ့နော်။ သူ့အာခံတွင်းထဲသို့တိုင် ကျွန်တော့်ငပဲကို မျိုချလိုက် ပြန်လွှတ်လိုက် အကြိမ်အတော်များများလုပ်ပြီးနောက် ပူနွေးစိုစွတ်နေတဲ့ သူ့လျှာကြီးဟာ ကျွန်တော့်ရွှေဥ တွေကို ထိုးမွှေပါတော့တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ပေါက်ဝလေးကိုလျှာဖျားနဲ့ထိုးကလိတတ်သလို ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ခုလုံး ကို အခုပဲသုက်ရည်တွေပန်းထွက်တော့မယ့်အတိုင်း ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်မှုတ်တတ်တာသူ့အကျင့်။ သစ်ပင်ကြီးရဲ့ အကိုင်းအချို့ကိုဆွဲပြု ထားရင်း သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ blow job မှာမျောပါရင်း ကျွန်တော့်မှာညည်းညူနေမိရပါတယ်။ အာ…..အ လုံးဝမထိန်းနိုင် ထိပ်ဝအထိ တက်လာမယ့်ခံစားမှုရလာချိန် ကျွန်တော် ရုတ်တရက် သူ့ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း အောက်ကိုထိုင်ချလိုက်ကာ သူ့ကိုဆွဲဖက်လိုက် တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လျှာများဟာ နှုတ်ခမ်းလွှာများကြား လှုပ်ရှားမိကြသလို ကျွန်တော့်လက်များကတော့ သူဝတ်ထား တဲ့ ရှပ်အကျ င်္ီကို ချွေးရွှဲနေတဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးကနေဆွဲချွတ်လိုက်ရော။ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာက ချွေးစိမ့်ထွက်မှုနဲ့အတူ လွင့်ပျံ့လာတဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့မွှေးမွှေးဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို အရူးအမူးဖြစ်စေတာကြောင့် သူ့လည်တိုင်ကို အသာငုံခဲမိရပါတယ်။ သူ့လည်တိုင် သူ့ကိုယ်အနှံ့ မနာမကျင် ခပ်ဖွဖွကိုက်ခဲတာကို သူကလည်းသဘောကျပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ချွင်းချက်ပါ။
သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ကိုယ်လုံးကို လွတ်ထွက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်သလိုမျိုးဖက်တွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကတော့ သူ့ကိုယ် အောက်ပိုင်းသို့ရွေ့ကာ ၀တ်ထားသော ဘောင်းဘီခါးပတ်တွေ၊ ဘောင်းဘီတိုတွေကို အလျင်အမြန်ပဲဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရော။ သူ့ပါးပြင် သူ့လည်တိုင် သူ့ရင်အုပ်တွေကို အနမ်းချွေရင်း ကျွန်တော်အောက်ကိုလျောချထိုင်လိုက်ကာ သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီအကုန် ရှူးဖိနပ် နဲ့ထိတဲ့အထိ ဆွဲချပစ်လိုက်တယ်လေ။ အိုး…..လှလိုက်တာ….သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ တော်တော်လှတာပါ။ ဆိုဒ်က ဒင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်နဲ့ အလုံးအ၀န်းကလည်း တကယ်ရှားတယ် သခွားသီးတစ်လုံးလိုပဲ။ သူ့ငပဲအလယ်ပိုင်းလေးက ရောင်ရောင်လေး ခုံးသလိုမို့ အဲ့တာကိုအသုံးချပြီး ကျွန်တော့် prostate ကိုထိအောင် ဘယ်လိုသွင်းမယ်လုပ်မယ်ဆိုတာ အကြိမ်တိုင်းသိပါတယ်။ ငပဲထိပ် ပိုင်းလေးဟာလည်းး အရည်ကြည်လေးတွေစို့နေတာကြောင့် အရောင်တောက်နေပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းအောက်က မေးသိုင်းကြိုးလေးကို ကျွန်တော်လျှာဖျားနဲ့ပင့်တင်ပေးတိုင်း ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်ဗျ။ လုံးဝန်းသော သူ့ငပဲခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းလွှာထဲသွင်းလိုက်ပြီးနောက် အားရပါးရ စုပ်ပြုမိသလို သူ့ရွှေဥတွေကိုလည်း လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့အသာပွတ်သပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပွတ်သပ်သမျှ လှုပ်ရှားသမျှသူသဘောကျ တတ်တာကြောင့် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် အားခံတွင်းထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင်ထည့်သွင်းလိုက်ရင်း ဆီးစပ်ကအမွှေးနုများနဲ့ ကျွန်တော့်နှာတံအထိ တိုးကပ်ပစ်လိုက်ရော။ ကျွန်တော်အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းရတတ်တဲ့ သူ့ချွေးနံ့နဲ့ကိုယ်နံ့များဟာ ခံတွင်းထဲ တိုးဝင် တိုးထွက်နေတဲ့ ငပဲနဲ့အတူ တို့တို့ထိထိပါ။
သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေထွက်လာသလို ကျွန်တော့်ဆံပင်ကောက်ကောက်ကွေးကွေးထဲ သူ့လက်ချောင်းတွေကိုထိုးသွင်းကာ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ခေါင်းလေးတလှုပ်လှုပ်နဲ့ သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲအသွင်းအထုတ်ခပ်စိပ်စိပ်လုပ်ရင်း ရွှေဥ တွေပါမကျန်ကစားပစ်တာပါပဲ။ အနံ့အသက်ဆိုးမဟုတ်သော သူ့ရွှေဥကရတဲ့ ခပ်သင်းသင်းကိုယ်နံ့ဟာ ကျွန်တော်သူ့ကိုပိုမိုတက်မက် စေသလားမသိ gym ကအပြန် သူရေချိုးပြီးချိန် တဘက်နဲ့ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ချိန်ဆို ဖက်ပြုတဲ့ပြီးနမ်းပစ်လိုက်တာ ပေါင်တွေကော ဆီးစပ်ကောပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ရွှေဥတစ်လုံးစီကို နှစ်ခမ်းလွှာတွေထဲအသာညှပ်ကာ ခပ်ဖိဖိဆွဲလိုက်လွှတ်လိုက်ကစားတယ် လျှာတွေနဲ့ ရစ်ဝိုက်ကာ စုပ်မျိုပါတယ်။ မသိမသာ သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်တော့ မျက်ဝန်းတွေကိုမှေးမှိတ်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖိကိုက်ထားတာ မြင်ရပါရဲ့။ ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်လေးဟာ သူအကြိုက်ဆုံး ကျွန်တော် blow job လုပ်ပေးချိန်လေးထဲက တစ်ခုပေါ့။ ရွှေဥတွေကို ဖွဖွကိုက်တယ် ဆွဲတယ် လျှာနဲ့ရစ်မွှေပြီး စုပ်တယ် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် သူ့နှုတ်ဖျားက နာကျင်မှုမဟုတ်တဲ့ အော်ညည်းမှုတွေကတော့ ထွက်လာမြဲပါ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ သူ့အော်ညည်းသံဟာ ခပ်တိုးတိုးမဟုတ်တော့ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်က တောင်ယံတွေကိုရိုက်ခတ်တဲ့ပြီး ပဲ့တင်သံအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ သူ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်ဖို့ နည်းလာပြီဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာသိတာကြောင့် ရွှေဥတွေကိုလွှတ်လိုက်ကာ ငပဲကိုပဲပြန်လည်ငုံခဲလိုက်ပါရော။ ကျွန်တော်သစ်ပင်ကို အားပြုခါးကိုကိုင်းကာ သူ့ကိုတင်ပါးတွေအပိုင်မပေး ခင် ခြောက်သွေ့နေတဲ့ငပဲကို တံတွေးရွှဲရွှဲပေးလိုက်တဲ့သဘောပါဗျ။ ကျောင်းကဘွဲ့ကိုယ်စီရပြီးနောက်ပိုင်း သူနဲ့ကျွန်တော် လိင်ဆက်ဆံ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အသက်အရွယ် ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုမှ နောက်ပြန်မလှည့်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော် အုတ်နံရံကိုရင်အပ်ထား ပြီး သူ့ငပဲကိုနောက်ကနေ တဆုံးထည့်ကာ မဆောင့်ဘဲဖိမွှေနေသောဖီလင်ကိုပြန်ပြီး သတိရမိပါတယ်။
ကျွန်တော့် ခရေ၀နှုတ်ခမ်းသားများဟာ သူ့ငပဲကိုဖျစ်ညှစ်ပြီးသကာလ အဆုံးထိတိုင်မျိုချလိုက်ပါတယ် ခပ်ဖြေးဖြေးပေါ့။ တစ်ချောင်းလုံး အဆုံးတိုင်ရောက်သွားချိန်မှာ သူတစ်ချက်တော့ ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အဆုံးထိဖိကပ်လိုက်ကာ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ရင်အုပ်နဲ့ နို့သီး ခေါင်းတွေကို လက်နဲ့ဖျစ်ရင်း စတင်လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့ အနေအထား position ဟာ ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ ပုံစံအနေအထားမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေမှာ အ၀တ်တွေနဲကတွဲလျောင်းတွယ်ငြိနေတာကြောင့် အခြားပုံစံကိုပြောင်း လဲလိုက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ အဆင်ပြေပြေ အထုတ်အသွင်းလုပ်နိုင်စပြုချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ငပဲကိုယ် ကိုင်ကာစတင်လက်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ငပဲဟာ ထိပ်ပိုင်းလေးဟာ လုံးဝန်းနေပြီး ကိုယ်ထည်ဝင်လာပြီဆိုရင် ပြည့်သွားတဲ့ခံစားချက် ကောင်းကိုခံစားရပါရော။ တကယ်ကောင်းတဲ့ဖီလင်….အာ…ပြည့်နေတာပဲ။ လွန်ခဲ့သောအခွန်ကာလက ဆုံးရှုံးနေရသော ခံစားချက်တွေ အကုန်သည် သူ့ငပဲကြီးတစ်ခုလုံး ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားလိုက်တာနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသလွားသလိုခံစားရပါတယ်။ အာ….လူသူလည်း ရှင်း….ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်စရာမလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲလို့ရနေတဲ့ သစ်တောထဲမှာ ချစ်သူလေးရဲ့ နောက်ဘက်ကနေပြုစုနေ တာကို ကျွန်တော်ကြိုက်သဗျ။ ဒါဟာ လုံးဝအသစ်ပါပဲ တစ်ယောက်ယောက်များ မတော်တဆမြင်သွားရင်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေရသလို ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး တုန်ခါနေသလို ခါရမ်းနေရတာများ ချာချာလည်။ နည်းနည်းလေးတော့ သူ့အားစိုက်မှုကို ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ဘောင်းဘီတွေနဲ့ခြေချုပ်မိနေတဲ့ခြေထောက်တွေကို ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပေမယ့် သူ ကောင်းကောင်းကိုလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဖမ်းထိန်းကိုင်လိုက် ရင်အုပ်ကနေ နည်းနည်းလေးချွန်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူဆွဲညှစ်လိုက်ကလိ နေသလို သူမှီတဲ့ ကျောပြင်ကိုလည်း မက်မက်မောမော အနမ်းပေးသေးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုင်တွယ်အားပြုနေတဲ့ သစ်ပင်ရဲ့ ပင်စည်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချောမွေ့နေပြီး သစ်ခေါက်ကြမ်းကြမ်းတွေမရှိတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်နေတော့ တစ်ခါတစ်ခါထိမိတဲ့ ဆံပင်တွေမငြိသလို နဖူးလည်းမရှတော့ဘူးပေါ့။ မြန်လိုက် နှေးလိုက် အရှိန်ကို လိုသလိုသုံးနေတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ ကစားမှုဟာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက prostate ကိုထိထိမိမိတိုးဝှေ့နေတာ တကယ်အံ့သြရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို လက်နှစ်ဖက် နဲ့ထိန်းကိုင်ထားတာ ဖျစ်ညှစ်မှုကိုခံစားလာရသလို ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်တွေဟာ အတွင်းထဲထိပိုပိုနစ်ဝင်လာရော။ နောက်ဆုံးတော့ လည်း သူ့ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ပါးစပ်ကို ခပ်ဟဟလုပ်ကာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်ရသလို ကျွန်တော့် G-spot ကို အချက်တိုင်းလိုထိခတ်နေတာကြောင့် မကြာခင် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာ ခံစားလာရပါတယ်။ ‘ပြီး…..ပြီးတော့မယ် ချစ်..အ…အ…ပြီးတော့မယ်’ ကျွန်တော် အငမ်းမရအသက်ရှူရှိုက်မိပါပြီ။ သူအနောက်ကနေ ကျွန်တော့်ကိုဆောင့်-ိုးနေသလို သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲကိုလှမ်းကိုင်ကာ စည်းချက်အတိုင်းကစားပေးပါရော။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာ ပေါင်ခြံကို ပြေးကပ်ဖို့ ပြင်နေသလို ခြေချောင်းလေးတွေ ကွေးကောက်စပြုကာ တင်ပါးတွေကိုနောက်ကိုပိုပိုပစ်ပြီး အားနဲ့တန်ပြန်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် သူ့ကိုယ်လေး တဆတ်ဆတ်ခါသွားတာ ခံစားမိရကာ သူ့ကိုယ်ထဲက သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တာကို သိလိုက်ပါ တယ်။ ပူနွေးတဲ့သူ့သုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းပန်းထည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်က ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဆုံးစွန်ပြီးမြောက်သွားစေ ရော။ သူ့လက်ဖ၀ါးအနှံ့နဲ့ သစ်ပင်ခြေရင်းတွေမှာ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေစိုရွှဲကုန်တယ်။ သာယာမိန့်မူးမှုနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်စက်ကို ပန်းထုတ်အပြီးမှ သူ့လက်ကိုင်ထားတာကိုလွှတ်တယ်ဗျ။
သစ်ပင်ကို ခဏခေါင်းနဲ့မှေးမှီငြိမ်သက် အသက်ရှူနေစဉ်မှာတော့ သူ့ငပဲကိုအသာအယာဖြေးဖြေးဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ငြင်ငြင်သာသာနမ်းလိုက်တာကို ခံစားရပါတယ်။ “ဟိုက်…ဟီးဟီး….ထားလိုက်ပါ ဘေဘီ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့” ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးမိပြီး သူ့ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တော့ နှုတ်ခမ်းမှာ သုက်ရည်တွေပေးလူးနေတာမြင်လိုက်ရပေမယ့် နှစ်ဦးသား နုညံ့သောမိန့်မူးသော အနမ်းပန်းတွေဝေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို အနမ်းပေးပြီးနောက် သူ့ဘောင်းဘီ ကိုခြေချင်းဝတ်ကနေဆွဲမယူပြီးဝတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီတွေကိုဆွဲမ၀တ်ဆင်လိုက်ပြီးနောက် အင်္ကျီတွေကိုရှာကြည့်ရော။ သူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားရဲ့အင်္ကျီတွေရယ် စက္ကူအညိုနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုတ်ကိုလှမ်းကိုင်ထား တာတွေ့ရပါတယ်။ “ဒါလေးကို စက္ကူနဲ့ထုပ်ထားမိတာ တော်သေးတယ် ဘေဘီ” သူက ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ပြောတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ စက္ကူစတွေအပေါ်မှာ လက်ဖ၀ါးရာအတိုင်း ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေတွေ့ရလေရဲ့။ သူလှမ်းပေးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူလိုက်ရင်း “ဒီစက္ကူတွေကို သိမ်းထားရတော့မယ်နဲ့တူတယ် ချစ်” လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ပါးပြင်မှာ ပါးချိုင့်တွေပေါ်တဲ့အထိပြုံးကာ ကျွန်တော့်ကို သူထပ်နမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော် စက္ကူနဲ့ထုပ်ထားတာကိုယူပြီး “ဒါဘာကြီးလဲဟင် ချစ်?”လို့မေးလိုက်တော့ သူက ခြင်းထောင်းကိုယူထားရင်း အဖြေပေးပါရဲ့။ “ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ လူတွေသွားလာလို့ရတဲ့နေရာတွေကို ညွှန်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံးစာအုပ်ကြီးပေါ့” ဘယ်လိုမှထိန်းမထားနိုင်စွာ ကျွန်တော်စိတ်လိုလက်ရပြုံးမိရပါတယ် နှစ်ကိုယ်သား နေရာအနှံ့ ခြေဆန့်နိုင်တော့မယ့်သဘောပေါ့လေ။
‘ဒီနေရာလေးဘေးမှာ ကြယ်ပွင့်လေးရေးမှတ်ဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်’လို့ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းစဉ်မှာ သူလေးကသတိတရ ပြောပါရဲ့။ အင်း….ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် စာအုပ်ပေါ်မှာ မကြာခင် ကြယ်ပွင့်များစွာပေါ်ထွန်းလာဦးမယ့်သဘောပေါ့ ဟုတ်လား။
Alex Aung (9 March 2015)
Posted by Alex Aung at 11:41 AM